फेसबुकमा बोलेकै भरमा बिश्वास गरी दिदिबहिनीले सुन पैसा र इज्जत लिलाम नगर्नुस् !
November 7, 2020 chothale
अभियान्ता सरु सुनार प्रबिधिको बिकास सँगै विश्व बजारमा सोसल मिडिया बिभिन्न सामाजिक सञ्जाल र त्यसको प्रयोगकर्ताहरु पनि दिन दिनै बढिरहेका छन । यीनै सामाजिक सञ्जालहरुको प्रयोग गरेर धेरै जनाले धेरै उपयोग पनि गरेका छन भने कसैलाई यीनै सामाजिक सञ्जालहरु निकै घाटक पनि बनेका छन । पछिल्लो समय अत्याधिक प्रयोगकर्ता रहेको एक सामाजिक सञ्जाल हो फेसबुक । यो धेरैका लागी फेसन बनेको छ । राम्रोसंग प्रयोग गर्न सक्ने र जान्नेहरुलाई फेसबुक धेरै उपयोगी भएको छ । फेसबुकबाट धेरै जनालले न्याय पाएका छ्न् उपचार पाएका छन् राहत पाएका छन् हरेक सूचना र…
सिंगो परिबार मिलेर बुहारीलाई मर’णो’सान्न हुने गरि कु’ट’पिट गरेपछि बुहारी रातारात भागेर आफनो ज्या’न बचाउन सफल भएकी छिन । यो घटना हो ललितपुर को । ललितपुरकी यि पि’डित सनिशा तामाङ पेशाले नर्श हुन । बिहे भएको ३ महिना भएको बताउने सनिशालाई विबाह लगत्तैदेखि पति सासु र ससुराले या’तना दिँदै आएका थिए । पछिल्ला दिनमा या’तना दिने क्रम बढेसँगै उनले त्यो रहस्य खोलेकी हुन । अहिले समय बिज्ञान र प्रबिधिको समय छ । मान्छेहरु एक क्लिकको भरमा पुरा बिश्व घुम्न र आफ्नो काम गर्न चाहान्छ । प्रबिधिसँगै मानिसहरु पनि सँगै हिड्यो…
मलाई दुईवटा श्रीमान चाहियो, मान्छ त यो समाज ? दुई श्रीमतीलाई सहज ठान्ने समाज किन दुईटा श्रीमान राख्न दिंदैन ?
November 7, 2020 November 7, 2020 chothale
रवीना देशराज समकालीन समाज भन्दा बेग्लै सोच राख्ने ब्यक्तिका रुपमा चिनिन्छिन् । उनी लैंगिकताका विषयमा परम्परागत सोच विपरित धारणा राखेर र आफ्नो वि ,किनी तस्बिर सार्वजनिक गरेर पनि चर्चामा छिन् । अभिनेत्री प्रियंका कार्कीसँगै वि,किनीमा उनको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट भएपछि त्यसले निकै चर्चा पनि पाएको थियो। उनका छोरा आयुष्मान देशराज पनि एक नेपाली चलचित्रका अभिनेता हुन् । सन्तान जन्माउन बिहे गर्नु नपर्ने धारणा राख्दै आएकी रवीना देशराजसँग प्रचलित सामाजिक ब्यवस्थाका बारेमा चक्रपथ डटकमका लागि बिनु पोखरेलले गरेको कुराकानीको केहि अंश जस्ताको त्यस्तै साभार गरेका छौ महिला झनबो ल्ड हुँदै…
मनोरन्जन, राेचकLeaveacomment
बिहानै शक्तिशाली नाग देवको दर्शन गरी ॐ लेख्दै (हेर्नुहोस आजको राशिफल)
आज मिति वि सं २०७७ साल कात्तिक महिनाको २२ गते शनिवारको दिन । इ स सन २०२० नोभेम्बर ७ तारिख ने सं ११४० कौलागा कार्तिक कृष्णपक्ष सप्तमी । मेष मध्यान्ह सम्म समय प्रतिकुल बढि देखिन्छ । मनमा शान्ति मिल्ने छैन । मध्यान्हबाट समय सामान्य सुधार आउनेछ । कामले पूर्ण गति लिने छैन । व्यापार व्यवसायमा आएको मन्दि कायम रहनेछ । आफन्तले धोका दिने छन् । आफ्नो धन अरुको लागि खर्च गर्नु पर्ला । वृष समयमा काम नगरे विग्रिने छन् । पूर्वान्हमा गरेका काम प्राय सफल हुने छन् । व्यापार व्यवसायबाट…